हाम्रो देशको इतिहास हेर्दा भ्रष्टाचारको खोलो नै बगेको छ । यो हाम्रो देशको लागि विडम्बना नै मान्नु पर्छ । अख्तियारले संस्थागत रुपमा गरेको काम कारवाही मुलुकको सुशासनमा निकै महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।
तर आज वाइड वडी जहाज प्रकरण सेलाउन नपाउँदै भ्रष्टाचारको जरो उखाल्ने सम्पूर्ण अधिकार लिएर बसेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जो आफैमा विवादमा परेको छ । कारण आयोगको प्रमुख राजनारायण पाठक जसको नकरात्मक चर्चा शिखरमा पुगेको छ । जताततै अख्तियारले कारवाही ग¥यो भनेर समाचारको विषय बनिरहँदा अब के भन्ने आफै भ्रष्टाचार, घुस जस्तो प्रकरणले हाम्रो देशमा र अन्तर्राष्टिय जगतमा नराम्रो सन्देश दिएको छैन ।
ठूला–ठूला जो अगुवा उही बाटो हगुवा भन्ने नेपाली उखान हाम्रो देशमा चरितार्थ भई हालै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त राज नारायण पाठकले गरि देखाएका छन् । नेपाल इन्जिनियरिङ्ग कलेजको जग्गा खरिद विवाद मिलाई दिने भन्दै ७८ लाख घुस लिएका थिए साथै विभिन्न व्यक्तिलाई आफ्नो निवासमा बोलाई घुस लिएको गैर–कानुनी काम गरेको, थप घुस नदिए भ्रष्टाचार मुद्दा लगाउने धम्की दिएको विवरण खुलासा भइ त्यसको सबुत र अभिलेख श्रव्य दृश्य (भिडियो) भएको र उक्त भिडियो प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा वलीले ४ महिना अगाडिनै हेरि मौन राखियो । किन, के र कति कारणले खुलासा र कारवाही गरिएन ?
निज आयुक्तबाट संविधान र प्रचलित कानून गम्भीर उल्लंघन गरेको निजको खराब आचरण भएको , आयुक्तको हौसियतमा निजले इमान्दारीपूर्वक कर्तव्य पालन नगरेको, आयोगलेनै बनाएको आचारसंहिता गम्भीर उल्लंघनगरेको देखिदा निजले पदीय जिम्मेवारी पूरागर्न नसक्ने देखिएको व्यहोरा सहितको महाअभियोग लगाउने प्रस्ताव उल्लेख हुदाँ–हुँदै यो महाअभियोग अघि बढाउन नसक्नु र राज नारायण पाठकको कामको क्षम्य गर्ने लक्ष्य सहित अघि बढाउनु नसक्नु कति लाजमर्दो निकम्मा जवाफदेहिता हो । ससंदीय दलको कार्यालयको सरकारको प्रचलित कानुन अनुसार प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्छ । यस्ता जघन्य अपराधको विषयलाई त्यत्तिकै थाँती राख्नु र रहनु दिनु हुँदैन । यदि सही समयमा सही तरिकाले ठूला अपराध गर्नेहरु उम्कने मौका पाउने र उक्त मुद्दा नजिर बन्ने छ भन्ने कुरामा शंका छैन् ।
यस्ता जघन्य अपराध अपराध कर्म गर्नेलाई कानुनको दायरामा ल्याई जेल, नेल र दण्ड सजायको भागिदारी नबनाए देशले कहिले उन्मूक्ति पाउने ? त्यस्तै कहि नलागेको जात्रा हाडी गाँउमा भने जस्तै अर्को उदारण न्यायलयका न्यायाधिश नै घुस खोरिमा, भ्रष्टाचारी र आफै अन्यायी हुँदाँ सोझा, निमूखा, गरीव, उपेक्षित र सर्वसाधारणले कहिले, कसरी न्याय र सुरक्षाको अनुभूति पाउने ?
भ्रष्टाचार नियन्त्रण, नियमन र दोषी माथि कारवाही गर्ने निकाय अख्तियार अनुसन्धान आयोग नै भ्रष्टचारीको प्रकरण मुछिएको छ । यसले गर्दा अख्तियारको काम कारवाही माथिको आम जनताको विश्वासनियता माथि प्रश्न उठेको छ । त्यस्तैमा माघ १४ गते सुर्खेतस्थित अख्तियारको कार्यालयमा कार्यरथ प्रहरी निरीक्षक जन्म अधिकारी वर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज हाताबाट १ लाख नगद घुस सहित रंगेहात पक्राउ परेका छन ।
भ्रष्टाचार निवारण र नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी भूमिका निर्वाहा गर्नु पर्ने संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग आफैमा अविश्वासको भूमिका देखिनु थाल्नु आपत्तिको विषय हो । ठूला–ठूला मुद्दामा मौनबस्ने तर तल्लो तहका कर्मचारीलाई मात्र घुस प्रकरणमा कारवाही गर्न बहादुरी देखाउने भूमिका विवादस्पद बन्नु चिन्ताको विषय हो । भने आफै विवादमा पर्नु अनुहारमा कालो टिका लगाउनु जस्तै हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो २८ औ वार्षिक प्रतिवेदनमा शिक्षा मन्त्रालय र संघीय मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयमा बढी हुने गरेको भन्दै उजुरी परेको सार्वजनिक गरेको छ । आफ्नै आयुक्तले गरेको भ्रष्टाचारको निष्कर्ष राजिनामा र वर्खास्ती मात्रै हो र ? यसरी भ्रष्टाचारबाट देशले कहिले उन्मूक्ति पाउने र देशको कहिले सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको कल्पना साकार हुने । “म”आफु पनि भ्रष्टाचार गर्दिन र अरुलाई पनि भ्रष्टाचार गर्न दिन्न ।’’ म भ्रष्टाचारीलाई देख्न सक्दिन” विभिन्न कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओली बोल्नु हुन्छ र प्रतिवद्धता व्याक्त गर्र्नुु हुन्छ । तर भ्रष्टाचार ओली सरकारकै पालामा मौलाउँदो छ । देखेर पनि नदेख्यै, सुनेर पनि न सुन्यै झै गरि रहेका छन् । ४,४ महिनासम्म पनि नदेख्या, नसुन्ये झै किन भए होलान् । बोलिको भने खोइरो खनि रहेका छन् । उल्टै भ्रष्टाचारीलाई प्रोत्साहन र हौशला हुने खालका गतिविधि बढाउँदै लगेका छन् । भनाई र गराईमा ठीक उल्टो हुँदा देश र जनताले दुःख सास्ती भोग्नु परेका हो । सरकारका सबै घोषणा लोकप्रिय र आशलाग्दो छन् । भ्रष्टाचार देशको लागि सोच्दै नसोचेको महामारी भएको छ । र, व्यवहार ठीक उल्टो हुँदा भ्रष्टाचारीलाई काधँमा बोकेर भ्रष्टाचारको विरोध गरिरहेका छन भन्ने भान हुन्छ ।
प्रकाशित मिति ः २०७५–११–२९